4 Mazano Ekuita Yako Yemavhidhiyo Vhidhiyo Sarudzo Kubudirira | Martech Zone
China, November 20, 2014 Douglas Karr
Isu takagovana yakakura infographic pane iyo kutanga gwara revhidhiyo yemagariro, ikozvino heino huru infographic kubva kuMedia Octopus pane matipi ekumisikidza yemavhidhiyo vhidhiyo yechako.
Hakuna kumbove nenguva iri nani yekuti mucherechedzo uise mari mukugadzira nekuparadzira zvemukati zvinoita kuti vanhu vaseke zvinonzwika, kugwinha nekutarisira kana kunzwa bvudzi riri kumashure kwemutsipa wavo kumira. Olly Smith, Commerce Director weEMEA, Midhiya isingadzoreki
Heano mana makuru anonongedzera ekugadzira yako online vhidhiyo zano:
Kunzwisisa vateereri vako - vhidhiyo yako inofanirwa kuve inonakidza, inovaraidza uye inodzidzisa kutora pfungwa. Ratidza vateereri vako kuti uve nechokwadi chekuti unopa zvirimo zvavari kutsvaga.
Gadzira zvirimo - uchavabata sei? Ita kuti vave nemanzwiro, akanaka, anofadza, uye aratidze yako brand.
Gadzirisa kugovera - vhidhiyo haina basa zvakanyanya kana pasina munhu anozoiona. Goverana izvi munharaunda uye nekukurudzira kuti uve nechokwadi chekuti iwe unosvika kune vateereri iwe vaunoda. Gonesa yako vhidhiyo yekutsvaga naizvo!
Pima uye unongedze kubudirira - uchaita sei kuyera kubudirira kwevhidhiyo yako? Ndinovimba une runhare rwekuita pakupedzisira iwe unonongedzera kune yekumhara peji kwaunogona kuyera shanduko.
Tags: Kushambadzira Vhidhiyoonline videoyemagariro vhidhiyovhidhiyo vhidhiyo yebhizinesivenhau octopusvhidhiyo kushambadzira zano